Daraasad cusub ayaa cadeyneysa: astaamaha yar yar ma iibiyaan | Abuurista khadka tooska ah
Haddii aad u samaynayso astaan ​​yar oo macmiil ama shirkaddaada ah, maskaxdaada beddel
Manuel Ramirez | | logos, dhowr
Wixii daraasad cusubi ka soo ururiso, waxay umuuqataa inay tahay in dhammaan astaamahaas minimalist-ka ah ee la qorsheeyay, ayaa ficil ahaan aan waxtar lahayn. Waxay umuuqataa taasi runti ma samaynayso saameynta la doonayo macaamiisha ama macaamiisha, laakiin dhinaca kale, dib ayey u tuuraysaa.
Waxaan ula jeedaa, waa maxay ka fikir sameynta astaan ​​sharraxaad leh Halkii laga yarayn lahaa kuwaas, marka laga eego dhinaca naqshadeeyaha, way ka fiican yihiin, laakiin kuwa doonaya inay adeeg codsadaan ama iibsadaan shay ama macaamil wanaagsan, midkoodna fu ama fa, mid baa odhan kara.
Daraasaddan ugu dambeysay waxay sii adkeynaysaa taas iibsadayaashu waxay doorbidaan astaan ​​sharraxaad leh marka loo eego kuwa astaamaha yar-yar ee ku jira isbeddellada. Waana waqti hore, astaamahan yar-yar waxay ahaayeen guul-guul sida ay khubaradu sheegeen, in kasta oo ay yihiin astaamo sharraxaad u horseeda doonta doonta biyaha qayb kasta.
Daraasadda lafteeda, oo lagu daabacay joornaalka Suuq-geynta Suuq-geynta, waxay ku saleysan tahay xaqiiqda ah astaan ​​sharraxaad ayaa ka guul badan soo saarista "aaminaad". Cilmi baaris ay sameeyeen barafasoor ka kala socda Canada, England iyo France ayaa baaray wadar ahaan 597 astaamo kuwaas oo, iyagoo kaashanaya kaqeybgaleyaasha daraasada oo gaaraya 2.000, ku hogaamiyay inay ogaadaan in astaan ​​badan oo astaan ​​ah ay tahay, saameynta ugu wanaagsan ee ay ku leedahay daabacaadda. iyo, sidaa darteed, ujeedka iibsiga.
Taas oo runti ah waxa aad raadineyso, sida ay tahay kiiska ereyadaas muhiimka ah ee na siiya tilmaamaha bogaggayaga soo degaya. Ka qaybqaatayaasha daraasadda sharraxaad ka heshay shirkado kala duwan iyaga inay xukumaan xaqiiqada astaantooda. Si ugu dambayn loo qeexo inay jirto xiriir wanaagsan oo muhiim ah oo udhaxeeya tilmaanta astaanta iyo faa iidada guud.
Waxaan ka hadli karnaa tusaale: minimalism ee astaanta cusub ee Slack. Laakiin waxaa jira astaamo fara badan oo aan la taaban karin oo luminaya iibka naftooda. Kuwa Citroën, Mastercard, Mitsubishi Motors iyo kuwa kaloo badan. Dabcan, xusuusnow in markay shirkaddu aad u ballaadhan tahay, ay iska ilaalin karto yeelashada astaan ​​sharraxaad leh oo ay ku salaysnaan karto mid yar, sida "M" ee loogu talagalay McDonalds iyo in aan aragnay munaasabadaha isdaba jooga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Haddii aad u samaynayso astaan ​​yar oo macmiil ama shirkaddaada ah, maskaxdaada beddel
Animation-ka 'Paramount Animation' wuxuu horey u leeyahay masko iyo astaan ​​u gaar ah
Sida loo qorsheeyo shabakadahaaga bulshada